🥇 aza ụlọ ọrụ ezé
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 767
Vidiyo nke ịdenye ọrụ n'ụlọ ọrụ ezé
Nyere akaụntụ maka ụlọ ọrụ eze
Dental office ajụjụ dị ezigbo mkpa! Dental office automation na-emepe ndepụta niile nke ọhụụ ọhụụ nye ọkachamara ọ bụla! Dental office accounting software na-akwado ajụjụ, management na ọbụna yiri nkata akara. Ọtụtụ ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ na eze na ụlọ ọrụ aza ajụjụ usoro ozugbo. N'otu oge ahụ, na ngalaba nke usoro nyocha nke ụlọ ọrụ eze 'nyocha', ị nwere ike ịchọpụta nke onye ọrụ gbakwunyere nke a ma ọ bụ ndekọ ahụ ma ọ bụ hichapụ ya. Site n'enyemaka nke usoro mmemme nke ọrụ nke eze eze, ndị nnabata nwere ike ịnabata ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa. Enwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka ndepụta ọnụahịa akọwapụtara; ọ nwere ike ịbụ ndepụta ọnụahịa niile ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa nwere ego ma ọ bụ ego. The eze ọrụ nlekota na ajụjụ omume na-enye iche iche arụmọrụ maka ndị ọchịchị, dentists na technicians, n'ihi na onye ọ bụla n'ime ha na-arụ ọrụ na ha onwe ha na mpaghara nke ọrụ. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịhazi usoro mmemme nke ọrụ eze na-arụ ọrụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ ọ bụla: ị nwere ike ịtọ akara ụlọ ọgwụ na windo isi, aha ụlọ ọrụ eze na aha usoro mmemme, ma setịpụ nke gị interface isiokwu. Nwere ike ịkwado onwe gị mara usoro mmemme nke nyochaa ọrụ nke ụlọ ọrụ eze. Iji mee nke a, budata ụdị ngosi ahụ na weebụsaịtị anyị wee bido! Ga-achọ mmemme mmemme kọmputa nke ụlọ ọrụ eze, ị ga-ejide n'aka! Workingrụ ọrụ na ụlọ ọrụ eze na-aghọ ihe dị mfe ma dịkwa mma.
Usoro nkwụsi ike nke ụlọ ọrụ ezé gị na-ahụ maka ekele maka ngwa nyocha. Na azụmaahịa, a na-ahụkarị ike na-alụkarị ndị mmadụ anya. Onye nchịkwa nwere ike ịda ọrịa, nkwukọrịta niile ya na ndị ọrịa jikọtara ya na ya; onye ọrụ nwere data niile gbara arụkwaghịm otu ụbọchị ma ọ nweghị oge iji nyefee ndị ọzọ niile ozi ahụ; ọ bụ ihe na-enweghị isi ichefu ma ọ bụ tufuo ozi a ma ọ bụ ozi ahụ. Akpaaka nke usoro azụmahịa na-emegide megide ọnọdụ ndị dị otú a. Edere ozi niile na usoro mmezi nke ụlọ ọrụ ezé, na-achịkwa usoro ma dozie ya, data gbasara ndị ọrịa na ọrụ na-echekwa na ngwa nyocha gị. Akwụsịghị nkwụsi ike ọbụlagodi mgbe ewebata onye ọrụ ọhụụ na usoro ahụ. Ya ma ọ bụ ya nwere ohere niile akụkọ ihe mere eme na nchekwa data, na-aza ajụjụ omume nke eze ọrụ management kpaliri nzọụkwụ na ọzụzụ adịghị ewe oge dị ukwuu. Iji hụ na n'ọdịnihu usoro ọrụ ndị dọkịta adịghị 'jikota' na oge a, yana onye nchịkwa nwere ike ịdekọ ndị ọrịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị, anyị na-akwado ka ị debe agba dị iche maka dọkịta ọ bụla. Iji mee nke a, pịa 'Gbanwee agba', họrọ nke achọrọ, pịa otu oge na bọtịnụ aka ekpe wee gosi nhọrọ gị site na ịpị 'OK'. Ọ bụrụ na ụlọọgwụ gị nwere ọtụtụ ndị dọkịta karịa ka agba dị na mmemme mmemme nke ọfịs eze, ị nwere ike ekenye ọtụtụ ndị dọkịta otu agba - dịka ọmụmaatụ, ndị anaghị arụ ọrụ n'otu ụbọchị. Ọ bụrụ n'inwee ụlọọgwụ nwere ngalaba yana n'otu oge nchekwa data ndị ọrịa, enwere ike ịpụta mpaghara ọzọ ebe ị ga-akọwapụta ngalaba (ma ọ bụ ngalaba) onye ọrụ ahụ na-arụ ọrụ. Mgbe ịbanye data niile dị mkpa, chekwaa kaadị ndị ọrụ na mgbanwe niile dị na ya.
Site n'enyemaka nke akụkọ, onye nduzi ma ọ bụ njikwa nwere ike nyochaa ọnọdụ nke omume na ụlọ ọrụ eze na-enweghị isi ihe ọ bụla dị mkpa. Iji nweta ozi na sekọnd ole na ole gbasara ọgwụgwọ ole akwụgoro taa na kemgbe mbido ọnwa ahụ, ego ole ka akwụgoro na ụgwọ, nke ndị dibia bekee na-eduga na ego ole, ole ndị ọrịa ọhụrụ pụtara kemgbe mmalite nke ọnwa, olee otu ndekọ dị egwu maka ọbịbịa ụbọchị na izu bụ, gaa na akụkọ pụrụ iche. Maka ndị ọkachamara nwere ọrụ 'Director', ọ ga-emepe mgbe ịmalitere usoro mmemme nke njikwa eze. Ga-ahụ otu ubi ekewara na ngalaba nwere eserese na eserese - ndị a bụ akụkọ nchịkọta banyere ihe ndị na-egosi ụlọọgwụ ahụ. A na-eji akụkọ 'ndị ọrịa' kewaa nchekwa data nke onye ahịa gị site na mpaghara dị iche iche, dị ka afọ, okike, adreesị, ọnụ ọgụgụ nke nhọpụta, mgbe emere nhọpụta mbụ, ego ọgwụgwọ, ọnọdụ akaụntụ nke onwe, otu ha siri mata ụlọọgwụ ahụ. , were gabazie. Site na akụkọ a, ịnwere ike ịdekọ ndị ọrịa niile, gụnyere ndị na-agabeghị ụlọ ọgwụ gị ogologo oge, ma jiri ezi uche na-eme nkesa SMS (ma ọ bụrụ na ị nwere nkwekọrịta na etiti SMS) yana ozi gbasara nkwalite na onyinye pụrụ iche.
Ezubere 'Ego' iji nyochaa ọrụ ego - niile ọnụ na nke ọ bụla n'otu n'otu. Karịsịa, iji chọpụta ego niile sitere n'aka ndị ọrụ, iji hụ mpaghara nke nwetakwula ego iji ghọta ma ị na-efunahụ ego n'ihi nke a na ndị ọzọ. Site na 'ụgwọ na ịkwụ ụgwọ', ị ga - ahụ ego nkwụnye ego niile, akaụntụ a na-akọwaghị, soro nkwụghachi ụgwọ ndị ọrịa, wee hụ ego ndekọ ego a kwụrụ. Na 'Ọrụ enyere' akụkọ, ị na-ahụ ozi na ọrụ niile enyere, chọpụta ma ọ bụrụ na a gbakọọ ha maka ndị ọrịa, ma nyochaa nkezi ọnụahịa nke ịgwọ otu eze.
Usoro ihe omume nke ndị otu USU-Soft nke ọkachamara ọkachamara na-enye ọtụtụ ohere maka nzukọ ahụike gị ịzụlite. Jiri ohere ndị a wee mee ka ụlọ ọrụ ahụike gị dị n'usoro.